Igama elithi "umsebenzi" lithetha izinto ezahlukeneyo kwiimeko ezahlukeneyo. Kwizenzululwazi, ngumbono we-thermodynamic. Iyunithi ye-SI yomsebenzi yinto yokudlala . I-physicists kunye namakhemikhali, ngokukodwa, bajonga umsebenzi ngokumalunga namandla :
Umsebenzi ngumbane ofunekayo ukuhambisa into emelene nomkhosi. Enyanisweni, enye inkcazelo yamandla yikhono lokwenza umsebenzi. Kukho iintlobo ezahlukeneyo zomsebenzi. Imizekelo ibandakanya:
Sebenza ngokuchasene nomhlaba
Sebenzisana nommandla wamagnetic
Umsebenzi womatshini luhlobo lomsebenzi oqhelekileyo ojongene nawo kwi- physics nakumakhemikhali . Iquka umsebenzi ohambelana nobukhulu (umz., Uphakamise i-elevator) okanye nayiphi na into ephikisayo. Umsebenzi ulingana namaxesha omkhosi umgama into ehambayo:
apho usebenza khona, uF umbutho ophikisayo, kwaye d ngumgama
Olu lingano lungabhalwa ngoku:
w = m * d *
Olunye uhlobo oluqhelekileyo lomsebenzi ngumsebenzi wokunyuka kwengcindezelo. Lo ngumsebenzi owenziwe ngamapistoni angenakucala kunye namaqondo afanelekileyo . Ukulingana ukubala ukwandiswa okanye ukunyanzeliswa kwegesi kukuba:
apho usebenza khona, uP uxinzelelo, kwaye i-ΔV ishintsho kwimiqulu
INgqungquthela yeSayini yoMsebenzi
Qaphela ukuba ukulingana komsebenzi kusetyenziswe le ndibano yesayina:
Umsebenzi owenziwa yinkqubo ejikelezileyo unomqondiso ongezantsi .
Ukuphuma kwefuthe ukusuka kwinkqubo ukuya kwindawo ejikelezileyo kunomqondiso ongezantsi .
Inkcazo ye-Alpha Decay
Scientific Law Inkcazo
I-Molar Heat Capacity Definition kunye nemizekelo
UBob Dylan noYohnny Cash: Ababhali beeNgoma ezimbini Benza iMbali
Ukusebenzisa iiNdaba kwiiKlasi eziPhezulu
Indlela Yokugcina Umthi Ngomnyaka Olandelayo
I-Hommage u-Frederic Chopin Meisterstuck Umthombo wePountain waseMont Blanc
Iimpawu ezinomdla malunga namaNcinci eMzantsi eMelika
Isihlandlo seMicrosoft Corporation
Itheyibhile yeeNkcazo kwiMfundiso yeMculo
Izibalo zeeKholeji zeeKholeji zeBhodi
Isifo Sokuqhawula Izifo - Ukukhusela nokuLawula
Iingcebiso ezili-11 zexesha lokuSebenza
Kutheni Abantu Baninzi Abantu Beza Neentlobano Zenjaba?
I-WPI, i-Worcester Polytechnic Institute GPA, i-SAT kunye ne-ACT Data
Ukwahlukana Phakathi kweNyanga ye-Moonroof kunye ne-Sunroof
Konke malunga neChoctaws kunye neMohawks
Ufunyenwe: Ugogo wam, u-Witch